Brexit: dhaqdhaqaaqa Dugaagga (ku dhowaad 100 malyuun) oo halis galaya – Kasmo Newspaper
Brexit: dhaqdhaqaaqa Dugaagga (ku dhowaad 100 malyuun) oo halis galaya
Updated - April 1, 2017 10:09 am GMT
Haddii Britain ka baxdo Midowga Yurub waa ku adkaan doontaa si ay ugu soo laabtaan, ugana dhigtaan Yurub gurigoodii mar kale.
Waxa laga hadlayana ma ahan markaan dadka ee waa 4 addinlaha sida Eeyda iyo Bisadaha Britishka ah, kuwaas oo Brexit u xadayn doonto dhaqdhaqaaqooda, sida milkiilayaashooda oo kale.
Waana, ugu yaraan, 15,9 malyuun oo isugu jira Eeyo (8,5 malyuun) iyo Bisado (7,4 malyuun) haysta Basaboorka Britishka, sida ku cad xogta “Fediaf” (European Pet Food Industry Federation), Jamciyadda Yurub ee soo saarta cuntooyinka dugaagga.
Haddii an la helin heshiis loo dhanyahay, dugaaggani la weheshado kama gudbi doonaan Gacanka Ingiriiska, si ay ugu dhex-tamashleeyaan Yurub inteeda kale; waxaana la mdi ah eeyda iyo bisadaha la safraya muwaadiniinta 27ka dal oo Britain tagaya.
Taas oo macnaheedu yahay in 53,5 malyuun oo Eey ah iyo 63,1 malyuun oo Bisado ah oo ku nool dhul-weynaha Yurub xayiraad la kulmi doonaan.
Midowga Yurub wuxuu horey ugu aqoonsaday Eeyda iyo Bisadaha maqaam gaar ah oo u oggolaanaya in ay si dhib yar oo caadi ah ugu dhex socdaali karaan gudaha dalalka xubnaha ka ah Ururka.
Ciddii ka baxaysa Midowga Yurub waa in ay ka samirtaa xitaa Baasaboorrada xoolahaan, taas oo ku adkayn doonta dadka Britishka ah sidii ay dugaaggoodaas uga soo bixin lahaayeen Jasiiradda. Ama kuwooda hadda ku haysta dhul-weynaha Yurub, ugu ceshan lahaayeen dalkooda.
Waa culays soo fuulaya shacab idil oo Dugaag ah oo tira ahaan le’eg dadweynaha ku nool dalka Talyaaniga.Hawsha dhibta badan ee dib-u-qaabaynta xiriirka Britain iyo Yurub inteeda kale, waxaa soo galaya cutub ka hadlaya dugaagga, kumana koobna Britain oo qur ah, mar haddii kaxaysashadoodu, gaar ahaan fasaxa xagaaga, tahay mid dadweynaha Yurub oo idil wadaagaan.
Xaalku wuxuu ku adkaan doonaa Eeyda iyo Bisadaha Boqoradda oo xorriyaddoodu ku koobnaan doonto oo qur ah gudaha Jasiiradda Britain, laakiin muwaadiniinta 4ta addin leh ee Yurub waxay haystaan 27 dal oo kale.
Ra’iisal Wasaare Theresa May waxay ballanqaadday in shuruucda Midowga Yurub oo idil an laga wada tirtiri doonin hannaanka caddaaladda dalka, laakiin ma caddeynin inta ay ka soo reebi doonto 40 sano oo shuruuc Yurubeed ah.
Dadka qaar ayaa ku fakari kara in nuglaanta iyo cakirnaanta wakhtiga darteed, xoolahan la weheshado ayan ku jirin ahmiyadda 1aad ee Xukuumadda Britain, sidaas oo ay tahay, Downing Street, curriga Ra’iisal Wasaaruhu wuxuu la mid yahay sarkaal dowladeed. Waana madaxa hargaantiga jiirarka “Chief Mouser to the Cabinet Office”, xilkaas oo hadda uu hayo “Larry”.
Ilaa waayadii Boqor “Henry III of England” ee Qarnigii 16aad, bisaduhu waxay leeyihiin maqaam shaqo oo rasmi ah, dhaqankaas iyo caadadaas oo ka caawimi kara dugaaggas rabbaayadda ah in ay ka badbaadaan hadda waxyeellada Brexit.
Su’aashu-se waxay tahay: toloow ma ku guulaysan doonaa “Larry” sidii uu Ra’iisal Wasaare Theresa May ugu qancin lahaa tixgalinta arrintaas?